Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Achọpụtala ikpe Hawaii Omicron Ugbu a
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Akụkọ Ahụike • HITA • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ngalaba Ahụike Hawai'i (DOH) State Laboratories Division (SLD) na-akwado SARS-CoV-2 variant B.1.1.529, makwaara dị ka Omicron variant, n'agwaetiti ndị a.
"Nke a abụghị ihe kpatara ụjọ, mana ọ bụ ihe kpatara nchegbu. Ọ bụ ihe ncheta na ọrịa na-efe efe na-aga n'ihu. Anyị kwesịrị ichebe onwe anyị site n'ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, iyi ihe mkpuchi, ịpụpụ ihe niile anyị nwere ike ime na izere nnukwu igwe mmadụ, "Onye isi ahụike Dr. Elizabeth Char, FACEP kwuru.
Na Mọnde Diagnostic Laboratory Services, Inc. (DLS) choputara ihe nlere nwere akara molikula na-egosi na o nwere ike ịbụ Omicron. Ngalaba na-ahụ maka ụlọ nyocha steeti mere usoro genome ngwa ngwa wee kpebie taa na ihe nlere ahụ bụ Omicron iche iche.
Onye COVID-19 dị mma bụ onye bi na O'ahu nwere akara ngosi na-agafeghị oke nke butere COVID-19 na mbụ, mana ọ gbabeghị ọgwụ mgbochi.
Nke a bụ ikpe gbasara mgbasa obodo. Onye ahụ enweghị akụkọ njem njem.
Achọpụtala ụdị Omicron na opekata mpe obodo 23 yana opekata mpe steeti abụọ ọzọ.
N'ime ọrịa a, ụlọ nyocha steeti DOH abụrụla onye ndu na-eduzi usoro mkpụrụ ndụ ihe nketa COVID-19, nke bụ ka esi mata ụdị Omicron. Usoro onyunyo anyị na-arụ ọrụ. Nkwuputa a bụ ihe ncheta ka anyị kpachara anya nke ukwuu ichebe onwe anyị na ndị anyị hụrụ n'anya, karịsịa n'oge ezumike," ọkà mmụta ọrịa na-efe efe nke steeti Dr. Sarah Kemble kwuru.
"Diagnostic Laboratory Services, Inc. (DLS) na-arụkọ ọrụ ọnụ na Ngalaba Ahụike kemgbe mmalite nke ọrịa a," Dr. Chris Whelen, osote onye isi oche na onye isi nchịkwa maka Microbiology na Molecular Diagnostics kwuru. "Mgbe anyị chọpụtara mwepu nke mkpụrụ ndụ spike, nke bụ ihe ngosi mkpụrụ ndụ na nje a nwere ike ịbụ ụdị omicron, anyị kọọrọ ya ozugbo na ụlọ nyocha steeti DOH wee ziga ha nlele maka usoro."
A gwara onye ọ bụla onye nyocha ikpe sitere na DOH kpọtụrụ ka ọ biko kwadoo na mbọ iji belata mgbasa nke COVID-19. A na-arịọ onye ọ bụla nwere akara ka a nwalee ma zere ndị ọzọ. A na-adụ ndị na-enweghị ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na-akpachi anya na ndị nwere COVID-19 ka ha nwalee.
Ozi gbasara nnwale na ọgwụ mgbochi n'efu bụ dị ebe a.